United oo heshiis kula gaaraysa Benfica saxiixashada daafaca Victor Lindelof. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / United oo heshiis kula gaaraysa Benfica saxiixashada daafaca Victor Lindelof.
United oo heshiis kula gaaraysa Benfica saxiixashada daafaca Victor Lindelof.
Posted by: radio himilo June 11, 2017
Muqdisho – Manchester United ayaa heshiis ku saabsan qaadashada daafaca Victor Lindelof la gaartay naadiga Benfica, sida ay xaqiijisay.
Ku biirista laacibkan 22 -jirka ah ee Sweden u dhashay wuxuu marayaa heerkii ugu danbeeyey ee hubinta tijaabada caafimaadkiisa. Waxaa la werinayaa in adduun dhan €35 million uu ku kacay qiima ahaan laacibkan.
War qoraal ah oo ay soo saartay ayay ku tiri: “United waxaa farxad u ah inay ku dhawaaqdo in heshiis ku aadan saxiixa laacibkan Lindelof la gaartay kooxda Benfica si habsami leh uu kusoo idlaan doono.”
“Xoga kale oo dheeraad waxaa lagu dhawaaqi doona marka la fuliyo tallaabta ugu danbeysa.”
Lindelof ayaa yimid Benfica bishii December 2011 wuxuuna kula guuleystay saddex Primeira Liga, laba koob oo Taca de Portugal ah iyo hal Taca da Liga ah intii uu ku sugnaa gegida Estadio da Luz. Wuxuu sidoo kale sanadkii 2015 xulkii kula guuleystay koobka European Under-21 Championship.
Macalin Jose ayaa aad u xiisaynayay inuu mar un laacibkan kusoo biiriyo kooxda marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
United waxaa sidoo kale lala xiriirinayaa daafaca Raphael Varane ee Real Madrid kaas oo kasoo dhinac shaqeeyey macalin Mourinho xilligii Santiago Bernabeu – in kasta oo warar tilmaamayaan in helidda laacibkan ay ku xiran tahay in kooxdu dhiggeeda Madrid ku wareejiso goolhayaha David de Gea.
Previous: Idaacadda Himilo oo qabanaysa Munaasabad lagu furayay tartan Quran Aqris.
Next: Bakayoko oo ku biiraya Chelsea.